Tsy latsaky ny 10 ireo naratra ka nalefa eo amin’ny hopitaly Manarapenitra Andohatapenaka sy HJRA ireo naratra raha ny fampitam-baovao teny an-toerana. Ankoatra ireo naratra sy vaky loha dia misy ireo tapa-tanana sy tongotra ary folaka. Nanamafy kosa ireo polisy misahana ny lozam-pifamoivoizana eo Tsaralalana raha nitafa manokana tamin’ny mpanao gazetinay fa tsy nisy ny aina nafoy. Vokatry ny tandrevaky ny mpamily roa tonta izay samy nirifatra mafy no nahatonga izao patsa iray tsy omby vava izao raha ny fitantaran’ny manodidina. Nitohana vokatr’izany ny fifamoivoizana tamin’iny faritra iny nandritra ny ora maro.
Mampamiromiro ny mpandeha ny hafainganam-pandehan’ireo fiarakodia mpitatitr’olona amin’ireo lalambe mikodana eto an-drenivohitra, tsy eny amin’ny digy ihany fa hatreny By-pass. Ireo mpitatitr’olona amin’ny ora tsy iasan’ny mpitandro filaminana tahaka ny alina izay efa nahitana fisavan’ny fitohanana manomboka amin’ny 7 ora sy sasany ary ny faran’ny herinandro moa efa tsy lazaina intsony. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao maro koa ny fahazoan-dalan’ny mpamily maro izay tsy manaja ny fitsipiky ny fifamoivoizana tahaka ny fetran’ny hafainganam-pandeha anaty tanàna. Anisan’ny fototry ny loza toy izao koa ny fifanenjehana amin’ny samy taksibe.